အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: အပ်နဲ့ကပ်ကျေး ကြိုက်ရာရွေး
29 Responses to “အပ်နဲ့ကပ်ကျေး ကြိုက်ရာရွေး”
အားလုံးကတော့ ပေါ်ယံတွေကိုပဲကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြတာပဲဗျာ.. ဒါကြောင့်လည်း သူတို့ ထွင်ထားတဲ့ 'လူမှာအ၀တ် တောင်းမှ အကွတ်' ဆိုတာတွေပေါ်လာတယ်ထင်တယ်.. အားလုံးက ရုပ်ချော၊ ရုပ်လှတာတွေ ချည်းကိုပဲ လွယ်လွယ် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်လေ.. သူတို့ကပဲ လွယ်လွယ်မြင်နိုင်တာကိုး..
အဖေ အပ်ချုပ်သမားက အပ်နဲ့ သူရင်းနှီးခဲ့တာကြာပီလေ.. အပ်အကြောင်းကိုရော.. ကပ်ကြေးအကြောင်းကိုရော ကောင်းကောင်းသိနေပြီလေ..
အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ရမဲ့ လူ့လောကမှာလည်း ဒီလိုပါပဲဗျာ.. လူတစ်ယောက်ကို အပေါ်ယံကြည့်၊ သူအပ်ါယံ ပြောဆိုတာနဲ့တော့ ဆုံးဖြတ်ရင် အရမ်းအန္တရာယ်များလှပါတယ်.. အချိန်အတော်ကြာ အတူနေကြည့်မှ၊ ဒါတောင်မှ အတူနေနေတဲ့ အချိန်အတွင်း ဘေးဒုက္ခ ကြုံရင် ဘယ်လိုရင်ဆိုင်တယ်.. ဘယ်လို ဖြေရှင်းတယ်ဆိုတာကို အတူတူဘယ်လိုရင်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကို သိဦးမှ.. သူဖြေရှင်းရင်ဆိုင်တာကိုလည်း ကိုယ့်အနေနဲ့ သူ့အရည်အချင်းကို မြင်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်မှာလည်း ဥာဏ် ရှိဦးမှ..
အမ ပြောတဲ့ ကပ်ကြေးနဲ့ အပ်လိုပါပဲဗျာ.. ကပ်ကြေးနဲ့ အပ်ကတော့ ပုံသဏ္ဍာန်ချင်းကွာနေလို့ မှတ်ရလွယ်တာမို့ လူတွေကတော့ အားလုံး ပုံသဏ္ဍာန်တွေက အတူတူတွေချည်းမို့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာလည်း ကပ်ကြေးကို အပ်ထက်ပိုဦးစားပေးမိခဲ့တာတွေကို အပ်ကို အပ်မှန်းမသိ မမြင်ခဲ့တာတွေ အများကြီးပါပဲ။ အသိတွေကို ဆထက်တပိုးတိုးအောင် လုပ်ပြီး ဆင်ခြင်ကြဦးမှ။
အမချော......ရွေးတော့မယ်ဆိုပါတော့ :) ခွိခွိ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်လည်း လက်တို့ဦးနော် :)
အစ ကတော့ ဘာမှ မကြိုက်ဘူး လို့ ရေးမလို့ အမ က စားစရာတွေ ဆိုရင် အားလုံးကြိုက်တယ် လို့ ရေးနေကြကိုး
ညီမ လည်း ရွေးတော့ မယ်ထင်တယ် စောင့်မျှော်နေတယ်နော် တဝါလည်းကျွတ်ခဲ့ပေါ့
ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့တွေက သူတို့ကိုရွေးစေချင်လို့ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဆွဲဆောင်နေကြတယ်လေ..
မရွေးမနေရဆိုပြီး အတင်းရွေးခိုင်းတာမျိုးလည်း ရှိတတ်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့က အခြားဟာကိုရွေးချင်ပေမဲ့ ငါတို့ကိုရွေးပါဆိုပြီး အတင်းခြိမ်းခြောက် ရွေးခိုင်းတာမျိုးဆိုရင် မရွေးချင်ပေမဲ့ နီးရာဓါးကိုကြောက်ပြီး ရွေးရတဲ့အခါ.......
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိရင်တော့ သိပ်ကောင်းမှာပေါ့ဗျာ။
Good ....... Good ........ Pretty Good .......
ရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ပြီး အဆိုးတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အားမွေးထားဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ညီမငယ် အစစ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
ဆုံးဖြတ်ချက် မမှားအောင် ဦးဏှောက်ကို မကြာခဏ
၂ ခုလုံးအသုံးဝင်တာမို့ ၂ ခုလုံးပဲရွေးလိုက်တော့မယ်။
လိုရင်လိုသလို သုံးရတာပေါ့ .... နော် ... ကောင်းဘူးလား :)
အဲ့ ဒါ ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့“အပြော”နဲ့ “အလုပ်” နှစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့် မိပါတယ်။
အပြောက ကပ်ကျေး၊ အလုပ် က အပ် လေ ၊ ပြောသလောက်လုပ်တဲ့ သူနဲ့ပြောသလောက်မလုပ်တဲ့ သူလေ၊
ဆိုင် လားတော့ မသိ ။
ဟိ များ ကတော့ အပ်ချုပ်ရတာ ဝါသနာမပါဘူးရယ် ခစ်ခစ် ဆိုင်မှာပဲ သွားချုပ်လိုက်တာပဲ ဒီတော့ မရွေးတော့ဘူးနော် ဟိဟိ
စ တာ နော်
မချော တကယ် ရွေးစရာလိုရင် ဝက်ကို လက်တို့လိုက် သိလား ဝက် ရွေးပေးမယ်နော်
Right!! Nice post!!
ျပ said...
ကျွန်တော့ စက်ချုပ်ဆရာ သူငယ်ချင်း ပြောဖူးတာက တမျိုး။ အဲဒါကြောင့် ဒီလူ အရွေးမှားတာ ဖြစ်မယ်။
November 1, 2010 at 12:05 AM
သူ့ ကြည့်ရတာ....အပ် ကို ရွေးချင်နေပုံပဲ...
အပ် တချောင်းထဲတော့ မရွေးပါနဲ့ အစုံပါတဲ့ အပ်ချုပ်စက် တံဆိပ်ကောင်းတာရှာဝယ်ပါ....
အလုပ်ထဲမှာ အဲ့လိုအဖြစ်မျိုး ကြုံဖူးတယ် ရောက်စက မြောက်ကြွကြွ နဲ့ အပိူးမကျိုးဘူးလို့ ထင်ရတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် ခုက ရုံးထဲမှာ သူမရှိရင်ပဲ ပျင်းသလိုလို ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့၂ပါး၂ နဲ့ လုပ်ပေးတတ်တယ် ။ တွေးမိတာက လူတစ်ယောက်ကို ခဏလေးတွေ့ရုံနဲ့ မဝေဖန်မိပါစေနဲ့လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိပေးမိတယ် ။ တန်ဖိုးဆိုတာ အချိန်ယူ ဆုံးဖြတ်သင့်တယ် ထင်ပါတယ် ။
သူ့နေရာနဲ့သူ တန်ဖိုးထားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
ကပ်ကြေးအသုံးဝင်ချိန်မှာ အသုံးချခဲ့တာကိုလည်း မမေ့သင့်ဘူးပေါ့။
ရွေးပြီးသွားရင် သိပါရစေဗျို့ ...း)
နောက်ဆုံးက တွေးစရာလေး ချပြထားတာကို နှစ်သက်မိတယ်
ဆင်ခြင်စရာလေးပါပဲ၊ သူ့နေရာနဲ့သူ အသုံးဝင် တန်ဖိုးရှိနေတယ်ဆိုတာလေးပေါ့...
လောကမှာရွေးချယ်စရာတွေများနေတဲ့အခါ အရွေးမမှားအောင်ဒီစာလေးဖတ်ပီးမှ ရွေးရမယ်။
မချောရေ ကတ်ကြေးနဲ့ အပ်လေး လာဖတ်သွားပါတယ်နော်..
မချောရေ တန်ဖိုး၇ှိတဲ့စားလေးတွေဖတ်၇လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်း မချော ရွေးတော့မယ်တဲ့။ အင်းလေ ဒီလေသဘော တရားတွေကို သိနားလည်နေလို့ ရွေးချယ်ရင်း ရွေးချယ်နေရင်းကြောင့် များလားးးးးးး............ ။ ဂွီ
ခက်တာက လှေကြုံထိုးကပ်ကြေးတွေ၊ တစ်ပွဲထိုးအပ်တွေဖြစ်နေမှာ စိုးတာ....။
အခုထိကို ရွေးဖို့ဆိုတာ ပိုခက်နေတာ..။
အင်း... ကပ်ကျေးမဟုတ်တဲ့ ကပ်ပြီး ကြီးနေတဲ့ ကပ်ကြီးတွေကိုတော့ စိတ်ပျက်လှတယ်။
Hi thanks for yet another very interesting post. Where do you get your inspiration for all this :|? - Tandarts
မချောရေ... ကောင်းလိုက်တာ ။ ဟုတ်တယ်နော်။ အပေါ်ယံမကြည့်ဘဲ အသုံးဝင်မှုကိုသာ မှန်ကန်ရွေးချယ်တတ်ကြရင် ...အားလုံး(အားလုံး) ကောင်းနေခဲ့မှာပါ။
ဟုတ်တယ်နော် လူတွေထဲ မှာလဲ လူချင်းတူပေမဲ့ အသုံးဝင်ပုံချင်းကွာတာပေါ့နော်.....
သူ.နေရာနဲ.သူ အသုံးဝင်နေရင်တော့ လူဖြစ်ရကျုးနပ်ပါပြီ...
အပ် လေး တစ်ချောင်းလောက် အသုံးဝင်အောင် ကြိုးစားလိုက်ပါဦးမယ်...
အိုကေ အိုကေ မမ....ညီမလေး အပ်ကိုပဲ ရွေးလိုက်တော့မယ်နော်။ :D